Tag: jikwaa ihe omume | Martech Zone
Tag: jikwaa ihe
Wzọ 9 iji kọwaa ihe omume B2B gị na mmemme Tech
Na Tọzdee, Septemba 26, 2017 Na Tọzdee, Septemba 26, 2017 Michael Doane
Ihe ohuru na nchịkọta Martech gị: Omume Management Software Omume ndị na-eme atụmatụ na ndị ahịa nwere ọtụtụ ihe. Chọta ezigbo ndị ọkà okwu, ịkọwa ọdịnaya dị egwu, ire nkwado, na ịnye ahụmịhe ndị bịara abịa nwere obere pasent nke ọrụ ha kwa ụbọchị. N'agbanyeghị nke ahụ, ha bụ ọrụ na-ewe oge dị ukwuu. Ọ bụ ya mere ndị na-ahazi ihe B2B ji na-agbakwunye Ihe Omume Tech na nchịkọta Martech ha. Na CadmiumCD, anyị ejirila ihe karịrị afọ 17 mepụta ma na-egbuchasị